कर्णालीमा कति गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् सरकारसँग तथ्याङ्क छैन (अडियोसहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, ४ कात्तिक (जागरण) कर्णालीमा कति गैरसरकारी नीकायहरुले काम गरिरहेका छन् यसको तथ्याङ्क कर्णाली प्रदेश सरकारसँग नभएको पाइएको छ ।
कर्णाली गरिबी, भोकमरी र वेरोजगारी समस्याले ग्रसित रहेको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न गैरसरकारी नीकायहरुले काम गरिरहेका भएपनि यस्ता संस्था कती छन् ? सरकारी तथ्याङ्कमा छैन् ।
विभिन्न सहयोगको नाममा संचालित यस्ता संस्थाहरुको रेकर्ड सरकारी नीकायसँग हुनुपर्ने भएपनि ती संस्थाहरुले कुन जिल्लामा के काम गरेका छन् त्यसको अनुगमन समेत नहुने गरेको पाइएको हो ।
अधिकांस एनजियो आइएनजियो कर्णालीको गरिबी वेरोजगारी कम गर्ने भन्दै यस प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकार भने यसतर्फ बेखवर भएको भन्दै नागरिकहरुले अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सरकारी नीकायले ध्यान दिन नसक्दा ती संस्थाहरुले गर्ने कामबाट के प्रतिफल आयो ? भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने हाल सम्म कति एनजियो आईजन्जियोले कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गरिरहेका छन भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कर्णाली रैबारसँग कुरा गर्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको महिला विकास अधिकृत तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रदेश सरकार सँग कानुन निर्माण भई नसकेको बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क राख्नका लागि प्रादेशिक ऐन बन्नु पर्ने भएकाले नबने सम्म कती संस्था छन् र के काम गरेका छन् भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धी विद्येयक तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उहाले विद्येयक पारितपछि मात्र तथ्याङ्क आउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
तर प्रदेश सरकार बनेको भने दुइ बर्ष पुगेको छ । यसरी सहयोगको नाममा आउने गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यशैलीमा सरकार मौन बस्नुले नागरिकहरुमा भने प्रश्न उब्जाएको छ ।
जनताको आवाजः डाक्टर केसीले अब दुःखेसो गर्नुको कुनै औचित्य छैन (अडियोसहित)
२३ श्रावण २०७५, बुधबार १४:०३ August 8, 2018 जागरण